Ukuhlukaniswa kwesitezi - Isazi seZD Floor
Hlela: UDenny　2020-03-10
Kulezi zinsuku, ukufakwa phansi komhlaba sekuyinto engcono kakhulu yokuhlobisa yonke indlu, kepha ukuhlukahluka emakethe kuyakhazimula. Ake sibheke ukuhlukaniswa kwesitezi nezimpawu zazo namuhla!
Izinhlobo zokubekwa phansi zingahlukaniswa ngokuhlukaniswa ngokhuni oluqinile, ukufakwa phansi komhlaba, bamboo kanye nokhuni flooring, laminate flooring, neplastiki flooring.
Isisekelo sokhuni esiqinile
Ukufakwa phansi ngokhuni okuqinile kuwuhlobo lwezinto ezifuywayo ezenziwe ngokhuni oluqinile ngumuntu ohlangothini, uhlangothi kanye nokunye ukucubungula okudingekayo. Kungumkhiqizo wokuphela okuphezulu osuselwa emvelweni wezemvelo nemikhiqizo yokuvikela imvelo nokuhlobisa phansi.
Izinzuzo: Igcina ukuthungwa okungokwangempela, umbala kanye nephunga lezinkuni. Izici zezinkuni eziqinile zemvelo zenza uphansi oluqinile lwokhuni lushintshe izinga lokushisa langaphakathi kanye nomswakama .. Ukuqina kwethanga kungadambisa umthelela wonyawo futhi kwenza abantu bakhululeke.
Okubi: ukungahambeki, kulula ukulahlekelwa isicwebezelisi Ukusetshenziswa kwezinsiza zehlathi kukhulu futhi izindleko ziphakeme.
Yaziwa nangokuthi iphepha elingafakwanga laminate izinkuni phansi, liqukethe ungqimba olungahambelani, ungqimba wokuhlobisa, ungqimba oluphakeme kakhulu lwengqimba, kanye nolwelwesi olulinganiselayo (oluvimbela umswakama).
Izinzuzo: ububanzi obukhulu bokukhethwa kwamanani, uhla olubanzi lohlelo lokusebenza; imibala eminingi ebanzi, ukumelana okuhle kwamabala, ukumelana kwe-acid ne-alkali, ukulungiswa okulula, ukusebenza okuhle kwe-anti-slip; ukugqoka ukumelana, i-antibacterial, akukho zinambuzane, isikhutha; I-Defform; ukusebenza kahle komlilo, isisindo esikhanyayo ukunciphisa umthwalo wesakhiwo; kulula ukubeka.
Okubi: Ukufakwa phansi kwamaminerali akulungile ekuvikeleni imvelo. Kuzokhipha i-formaldehyde ngesikhathi sokusetshenziswa.Ibaluleke kakhulu ukugwema amabhulakufini.Uma amanzi esegcotshwe, isimo sawo sekunzima ukubuyiselwa. Ezimweni ezinzima kakhulu, singase siklwebheke.I-flooring yamaminerali icindezelwa ukushisa okuphezulu. Iphansi licindezelwe ngokushisa okuphezulu futhi ubunzima bukhulu kakhulu, ngakho-ke induduzo yabo ayinampilo.
3.Solid floor composite floor
Izinto ezingavuthiwe eziqondile zokusebenzisa phansi ngokhuni ngokhuni, ezigcina izinzuzo zokumiswa komhlaba ngokhuni okuqinile, okungukuthi ukuthungwa okungokwemvelo nezinyawo ezintofontofo, kepha ukumelana kokugqoka okungaphezulu komhlaba akulungile neze
Flooring Izinkuni okuqinile zingahlukaniswa izigaba ezintathu: ezintathu-ungqimba oluqinile flooring izinkuni, multi-ungqimba oluqinile flooring izinkuni kanye joinery flooring.
Izinzuzo: zemvelo futhi zinhle, zizwa unyawo lukhululekile; ukumelana ne-abrasion, ukumelana nokushisa, ukumelana nomthelela; ukubuyiselwa komlilo, isikhutha kanye ne-mothproof; ukufakwa komsindo nokugcinwa kokushisa; okungelula ukuwohloka;
Okubi: Uma ikhwalithi yeglue ingeyinhle, into yokwenzeka kwe-degumming izokwenzeka; ungqimba olungaphezulu luthambile, futhi kufanele unake ukugcinwa lapho ulungiswa.
4. bamboo kanye nokhuni phansi
I-bamboo kanye nokhuni flooring ukwehla bamboo wemvelo ibe yimichilo, asuse isikhumba se-bamboo kanye ne-bamboo sacs, futhi asebenzise izingcezu ze-bamboo ububanzi.Umva kokupheka, ukukhipha amandla nokuphelelwa amanzi emzimbeni, kuguqulwa kube yizinkuni zoqalo bese kuhlanganiswa ndawonye. Isakhiwo esinamandla, ukuthungwa okucacile, ubulukhuni obuphakeme, nobuntu bawo obuqabulayo bathandwa abathengi.
Okubi ukuthi awukho umsebenzi wokulungiswa kwezinga lokushisa wezinkuni eziqinile, futhi kuyabanda kuzo zonke izinkathi zonyaka
5. Iphansi leplastiki
Iphansi leplastiki libhekisa phansi okwenziwe nge-polyvinyl chloride. Ngokukhethekile, isebenzisa i-polyvinyl chloride resin ne-calcium powder njengezinto zokusetshenziswa eziyinhloko, ingeza ama-filler, ama-plasticizer, ama-solidab, ama-colorants nezinye izinto ezisizayo, futhi isebenzisa inqubo yokuhlanganisa noma ikhalenda, i-extrusion noma i-extrusion ku-substrate eqinile emise sheet. Kwenziwe ubuqili.
Iphansi le-PVC linamaphethini ahlukahlukene afana nephethini yokhaphethi, iphethini yamatshe, nephethini yaphansi yokhuni. Amaphethini anengqondo futhi muhle, angahlangabezana nezidingo zamakhasimende ngazinye zezitayela zokuhlobisa ezahlukahlukene. Izinto zokwenziwa zingumvelo imvelo, azinobuthi, izinsiza ezingavuselelwa, ezingekho ubuthi Ayikho imisebe. Ngezinto ezingavikeleki amanzi, ezingavuthisi umlilo, ezingahambi kahle futhi ezingahambisani nemithi. Futhi ukufakwa kuyashesha futhi kulula ukukugcina.
Ukuhlukaniswa kwesitezi Okuqukethwe okuhlobene
Izindlela zokubeka phansi ziyinkimbinkimbi kakhulu futhi zibiza ngaphezu kwesicelo se-tile. Izindlela ezivame kakhulu zokubekwa phansi yilezi: indlela yokubambelela eqondile, indlela yokubeka i-keel,...